Heal Zimbabwe Trust Inoti Kushungurudzwa kweVanhu Kuri Kukwira Mune Mamwe Matunhu
Sangano reHeal Zimbabwe Trust rinoti ongororo yarakaita musvondo mbiri dzapfuura inoratidza kuti kune kushungurudzwa kwevanhu kwakawanda kuri kuitwa nebato riri kutonga reZanu PF, masabhuku, uye nemadzishe mune mamwe matunhu emunyika.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano iri, VaRawlings Magede, vanoti ongororo yavakaita inoratidza kuti kune kushungurudzwa kwakanyanya kumatunhu maduku anoti Mazowe neMt. Darwin, mudunhu reMashonaland Central, richiteverwawo neManicaland.
VaMagede vanoti vanonyanya kutyisidzira vanhu ibato riri kutonga, reZanu PF, richiteverwa nemadzishe.
Vanotiwo kune mhando nhatu dzekushungurudza nadzo vanhu dziri kushandiswa, dzinoti kutyisidzirwa, vanhu vachiyeuchidzwa zvakamboitika muna 2008, kumanikidzwa kuenda kumisangano yeZanu PF, uye kuparadzwa kwemisangano yemamwe mapato anopikisa Zanu PF.
Hurukuro naVaRawlings Magede